Manjaro nekuramba uchiyeuka pane Pendrive. Saka unogona kuzviita | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi mishoma yapfuura takakuratidza kuti sei gadza Manjaro pane pendrive nenzira yakachengeteka. Iyo sisitimu inotibvumidza isu kuti tiise iyo inozivikanwa Arch Linux-yakavakirwa kugovera kubva pamufananidzo yakanyatsogadzirirwa iyo, asi, seakawanda emifananidzo iyi, ine zvaisingakwanise, tisingatauri kuti inongowanikwa mune yayo Xfce desktop edition. Nhasi tave kuzokudzidzisa maitiro ekuisa Manjaro pane pendrive kana zvisina kudaro zvakanyanyisa kukosha, kunyangwe iwe uchifanirwa kungwarira kuti usazvipwanya.
Tichishandisa nzira iyi tichakwanisa kuisa Manjaro sekunge tiri kuzviita pane rakaoma dhiraivhu. Zvese zvichave zvakafanana sekunge takazviisa paPC, nemusiyano watinofanira kutanga kubva paUSB kuti tikwanise kuushandisa. Zvakare, izvi zvinoshanda nechero shanduro yeManjaro, kuti tikwanise kusarudza iyo KDE edition inova iyo yandinofarira zvakanyanya. Hatifanire kuwedzera chero chinhu kune vanofarira faira chero, saka tinogona kushandisa Sudo pacman -Syu yekumisikidza kuisa nekugadzirisa mapakeji.
1 Maitiro ekuisa Manjaro pane Pendrive
2 Yakagadzirira kushandisa
Maitiro ekuisa Manjaro pane Pendrive
Tisati tatanga, isu tinofanirwa kutsanangura zvatinoda:
Mufananidzo we ISO weManjaro, unowanikwa pano.
Chirongwa chekugadzira yekumisikidza USB, senge Etcher.
Pendrives maviri, imwe yatichagadzira iyo yekuisa USB uye imwe yatinoisa iyo yekushandisa system. Hushoma saizi inofanira kunge iri 4GB kana tikasarudza "Minimal" vhezheni kana 8GB kana tikasarudza yakajairwa vhezheni. Izvo zvakajairwa zvinosanganisira yakawanda software inova bloatware.
Isu tinoenda kune download webhusaiti uye kurodha chero vhezheni yeManjaro.
Kana isu tisina iyo yakaiswa, isu tinoisa Etcher kana chero imwe software kugadzira yekuisa USB.
Isu tinoisa pendrive uye tinogadzira iyo yekuisa USB. Muchikamu chechitatu pamusoro apa une chinongedzo chinotsanangura maitiro kuzviita naEtcher.
Kana tangoita iyo USB yakagadzirwa, tinotangazve komputa uye titange kubva pairi.
Tisati tapinda muRarama Session, isu tinofanirwa kusarudza yedu mutauro, zone uye keyboard dhizaini. Isu tinogona zvakare kusarudza kuti topinda neyaimba here kana yakavhurika sosi madhiraivha. Kana tangosarudzwa, tinopinda.
Zvinokurudzirwa kubatana neinternet, asi isu tinogona kuisa iyo system isingaenderane.
Tinodzvanya pa "Vhura Installer".
Kana yapedza kuongorora, tinobaya pane «Inotevera».
Isu tinove nechokwadi chekuseta yedu nguva yenguva uye fomati nenzira kwayo.
Kubva pano ndipo panobva chinhu chakakosha, uye patinofanira kungwarira. Mu "Sarudza mudziyo wekuchengetedza", tinosarudza yedu pendrive, ndiko kuti, matiri kuda kuisa Manjaro. Kana tikakanganisa pano, tinogona kukwenya mashandiro anoita iyo PC.
Tinobaya pane «Erase disk».
Kana tichida, tinogona kumuita kuti atigadzirire nzvimbo yekuchinjanisa. Mumuenzaniso, ini ndasarudza "hapana hibernation", nekuti icho chinhu chandisingowanzo shandisa.
Isu tinoongorora kuti zvese zvakaringana uye tinya «Inotevera».
Isu tinozadza muminda yeZita, zita reTimu, isu tinoisa password uye tinobaya pane «Inotevera».
Takasarudza hofisi suite. Ndafunga kusaisa chero nekuti ini ndoda LibreOffice mune yayo yazvino vhezheni. Kana isu tikachiisa kubva pano, ichaisa iyo yakakurudzirwa vhezheni, iyo yakati kurei uye yakagadzikana. Uye «Inotevera».
Isu tinoongorora kuti zvese zvakaringana imwezve nguva. Tichiri munguva yekuti tisakanganisa chero chinhu, asi ini ndinoomerera pakuona kuti tiri kuzviisa pane iyo pendrive.
Tinomirira kuti kuiswa kwacho kupedze. Zvinotora nguva yakareba kupfuura kana tichizviita pane rakaomarara diski; vhidhiyo yacho inomhanyisa kwazvo.
Pakupera kwekumisikidzwa, tinogona kutarisa bhokisi kuti titangezve kana kuenderera kuyedza.
Iye zvino isu tinongofanirwa kutangazve uye kupinda kubva kuUSB.
Uye chinhu ndechekuti iyo Live Sessions yakanaka, iwo chaiwo michina zvakare uye maviri-bhutsu futi, asi izvi zvekugara uchitora "PC" nesu pasina kukuvadza ruzivo pamakomputa edu zvinotonhorera, handiti?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekuisa Manjaro nekuramba uchichengeta pane pendrive
Nzira isingawanzoitika ndeye LiveUSB Kuisa inowanikwa muAUR repositories (kune avo vane Arch-based distribution), pasina kumbobvira vaise Manjaro operating system pachigadzirwa.
Unogona kuisa Manjaro kune yekunze hard drive nekungoita zvikamu zvitatu, 1 EFI kupatsanura kwe500m uye imwe yeiyo system / muExt4 ine ingangoita 100GB kana kupfuura (nezvikamu zviviri izvi system ichatanga) uye imwe inogona kusiiwa mukati. NTF fomati yeIyo inogona kuverengerwa nemamwe maPC uye mafaera apfuura (Iyo dhisiki inofanirwa kunge iri GPT kana kuifometa muGPT).